Chiratidziro "Ndangariro dzaAntonio Gala" dzinovhura muCórdoba | Zvazvino Zvinyorwa
Chiratidziro "Ndangariro dzaAntonio Gala" dzinovhura muCórdoba
Kana iwe uchida munyori Antonio Gala senge ini, iwe uchave unofara kunzwa iyi nhau. Kana iwe uchibva kuCórdoba, shanyira guta racho munguva pfupi kana kuti uripedyo naro, une mhanza. Mavhiki mashoma apfuura chiratidziro chakavhurwa veruzhinji "Ndangariro dzaAlexander Gala" pahwaro hwake.
Uye kana iwe uchinetseka kuti chii iwe chaunogona kuwana ipapo, ndikuudze iwe kuti yakanaka chikamu cheayo ese ayo ndangariro, kubvira editions dzekutanga, kusvikira zvinyorwa, mibairo, nezvimwewo, kusanganisira izvo Canes saka zvako waanogara achifamba naye uye waakabvunza naye kune vezvenhau uye terevhizheni. Chiratidziro ichi chakavhurwa kutanga kwaGumiguru kuAntonio Gala Foundation, yaimbova Convent yeCorpus Christi uye ichave ne chunhu zvachose kusvikira chimwe chiziviso chiripo kuvhura veruzhinji kubva Muvhuro kusvika Mugovera en purogiramu kubva 12.00 kusvika 14.00 uye kubva 18.00 kusvika 21.00.
Chiratidziro ichi chinotora kushanya kune ese ari mairi nhoroondo yehupenyu yemunyori kana iri yakanaka kwazvo basa rekunyora, iyo isina kumira kurumbidza chero nguva iyo Gurukota razvino retsika uye aimbova meya weguta Rosa Aguilar, uyo akataura mazwi anotevera kuna Antonio Gala nebasa rake: «NaAntonio ndakakwanisa kunyemwerera. Uye ndakagovanawo manzwiro ». Akamutendawo iye ega uye pamberi pevanhu vese nekusarudza Córdoba, taundi rekumusha kwake, senzvimbo yekuratidzira kwechigarire, uko munyori akanaka akataura kuti pazera rake aive asisiri kuzobva kuCórdoba: Izvo zvakakosha kurarama chero mutengo. Asi kurarama hakusi kwekuramba uri mupenyu chete asi kutora chikamu mune chakavanzika chakavanzika ihwohwo hupenyu hwezvakanaka zvekukwira nekudzika, kwekudyara kwayo kusina mweya nekukohwa kwayo; Hatisi kuzogara tiri vadiki. Kunamatwa kwekusabhadharwa kwezera hupenzi. Kune varume vakuru, mapenzi, tese tinoziva mumwe munhu. Mune mashoma mashoma kupfuura madiki morons. Ehezve, kune iyo nguva dzose chikonzero chekuti vanhu havawanze kuchembera. Mapenzi akare haana akamboenzaniswa "Gala akadaro.
Iwe unotsunga kuishanyira?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Noticias » Chiratidziro "Ndangariro dzaAntonio Gala" dzinovhura muCórdoba
6 isingazivikanwe mabhuku emhando
"Mumvuri wegondo", yakasarudzika classic naPérez-Reverte